Olan’ny Oniversite: mitokona ny mpampianatra ao Fianarantsoa | NewsMada
Olan’ny Oniversite: mitokona ny mpampianatra ao Fianarantsoa
Par Taratra sur 20/09/2019
Mafanafana ny tontolon’ny fampianarana eny amin’ny oniversite. Eto, ny mpampianatra indray no mahatsiaro marary ka mandrangaranga fitokonana izy ireo.
Naneho firaisankina ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ao Fianarantsoa.
Nametraka fe-potoana 48 ora ho an’ny fanjakana izy ireo hamahana ny olany, nanomboka ny alatsinainy teo. Tapitra izany fanambanana fitokonana izany ka taorian’ny fivoriambe natao ny alarobia teo, tapaka fa miato ny asa fampianarana ao amin’ny oniversiten’ny Fianarantsoa mandra-pahazoana valiny mahafa-po avy amin’ny fitondrana.
Hatreto, noferana ho herinandro aloha izany hetsika fitokonana izany ka hiverina hivory amin’ny herinandro handinihana ny tohiny, araka ny tatitra nalefan’ny Seces Antananarivo. Nivory ihany koa ny oniversiten’Antsiranana, saingy mbola tsy nanapa-kevitra amin’ny fitokonana.
Anisan’ny anton’ny fitokonan’ny mpampianatra eny amin’ny oniversite, araka ny tatitra nalefan’ny Seces Antananarivo, ny momba ny “dérogation spéciale”. Andrasana ny valin-tenin’ny praiminisitra na mifanaraka na tsia amin’ny lazaina fa baiko midina izay mifanohitra amin’ny lalàna velona sy ny sosokevitra natolotry ny praiminisitra izany.
Tsy mitovy amin’ny asan’ny mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny ny havesatry ny andraikitra maha mpampianatra mpikaroka sy maha mpikaroka mpampianatra na teo aza ny “note de service” avy amin’ny lehiben’ny governemanta mikasika ny fampanarahan-dalàna ny fahafahan’ny mpiasam-panjakana malagasy mamita iraka any ivelany.
Andrasana koa ny famoahan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola ny fomba sy ny tetiandro handoavan’ny fanjakana malagasy ny trosan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra vokatry ny “3 décrets” aminy.
Momba ny tambinkarama fanampiny amin’ny fikarohana sy fandalinana ary ny ora fanampiny, miandry ny fivoahan’ny «compte administrative » amin’ny fomba ofisialy ny fandoavana izany ho an’ny taona 2016 an’ireo misotro ronono. Tsy azo ekena velively ny famerana ho 1 500 ora fotsiny ny ora azo tanterahina ao anatin’ny ora fanampiny mandritra ny taom-pianarana iray. Takina ny fanatanterahana ny andininy faha-31 amin’ny lalana 1995-023: ny fanomezana “prime d’encadrement” ho an’ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra nahavita be.